true drugs /zu-ZA/tools-for-life/drugs/steps/why-people-take-drugs.html read 1 9 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/drugs_zu_ZA.jpg Izimpendulo Kwizidakamizwa
Abantu basebenzise izidakamizwa inqobo nje uma bezama ukudambisa izinhlungu nokugwema izinkinga. Ngaphambi kwaphakathi nekhulu leminyaka elidlule, nokho, iningi labantu belingazisebenzisi izidakamizwa. Kusukela ekuqaleni kweminyaka yama-1960s, lokhu kwashintsha. Namuhla, izigidi zabantu kuzo zonke izingxenye zomhlaba zidla izidakamizwa.
Isidakamizwa yinto abantu abayithatha emizimbeni yabo ebangela ukulimala emzimbeni kodwa isetshenziswe yibona ukuzama ukunciphisa izinhlungu noma ukukhathazeka, ukukhiqiza imizwa ejabulisayo noma ukuthuthukisa ukusebenza kwabo emsebenzini.
Izibonelo zezidakamizwa zibandakanya i-heroin, i-cocaine kanye nensangu. Utshwala nabo buyisidakamizwa.
Kukhona nezidakamizwa eziningi ezibekwe odokotela njengomuthi ezigulini zabo. Lezi zaziwa njengezidakamizwa zokwelapha, futhi ezibizwa nangokuthi izidakamizwa zokwelapha.
Kunezinkulungwane zamagama esitsotsi awezidakamizwa.
Izidakamizwa kungenzeka, futhi zivame ukwenza, zibe ukwakheka komkhuba. Umuntu akasakwazi ukuyeka ukuzithatha.
Noma eyeka, nokho, izinkinga azipheli kulelo phuzu. Imiphumela yokudla izidakamizwa isikhathi eside ingenza umuntu abe buthaka futhi zimlimaze ngokomzimba (ukwenza ngomzimba) nangokwengqondo (ukukwenza ngengqondo).
Ngisho nomuntu ongazange athathe izidakamizwa iminyaka unezikhathi zokungabi nalutho emnqondweni. Isikhathi sokungabi nalutho emnqondweni yisikhathi lapho othile enokuntula ukuqwasha, inkumbulo noma ukuqonda okwenzekayo eduze kwakhe, sengathi umgqondo wakhe awnaulutho. Isibonelo, kungenzeka ukuthi ushayela emgaqweni omkhulu. Kungazelelwe ukunakwa kwakhe kuyazulazula futhi isikhashana nje akasayilawuli imoto ngoba ukunakwa kwakhe akukho ekushayeleni kwakhe. Umphumela ungaba yingozi. Izingozi eziningi zenzeka ngoba umuntu ubedla izidakamizwa.
Izidakamizwa zingalimaza ikhono lomuntu lokufaka ukunaka kwakhe kokuthile, okusho ukuthi akakwazi ukusebenza kahle futhi ukuthola kunzima ukufunda.
Umphumela walokhu ungabhubhisa impilo yomuntu.
Uma izidakamizwa zinayo yonke le miphumela emibi, kungani abantu beqhubeka nokuzithatha?
Kwenzeka ngale ndlela. Lapho umuntu esezinhlungwini noma engathokozile futhi engatholi ukukhululeka (ukunciphisa noma ukunciphisa ubuhlungu) ekwelashweni, uthola ukuthi izidakamizwa zimnika ukukhululeka. Okwesikhashana, lezidakamizwa zibonakala zimsusa ubuhlungu bakhe noma zimenze azizwe engcono.
Kodwa ke, ukuze lomphumela omuhle uqhubeke, umuntu kufanele aqhubeke nokuthatha isidakamizwa. Ngokushesha yena udinga okwengeziwe. Ekugcineni, yena uzoyeka ukwenza noma yimuphi umzamo wokwenqaba ukuthatha lesidakamizwa. Yena uzobe encike kuso. Imvamisa yena uzoba umlutha, okusho ukuthi uyehluleka ngokuphelele ukuyeka ukusithatha.
Akekho ofuna ukuba umlutha wezidakamizwa. Ukube lo muntu wayazi, eminyakeni edlule, ukuthi ikhona enye indlela yokwehlisa izinhlungu zakhe noma ukungajabuli, ngabe uyithathile leyo ndlela. Kepha imvamisa yabantu itshelwa ukuthi alikho ikhambi nokuthi izinhlungu zabo zingokomfanekiso. Impilo ingaba yimbi kakhulu ukuyibekezelela. Imvamisa umuntu ube eseba i-habitual yokusebenzisa izidakamizwa.
Inkinga yomuntu emenze ukuthi aqale ukusebenzisa izidakamizwa kungenzeka ukuthi kube “ukudabuka” noma “ukukhathala” nje. Noma yini eletha ukukhululeka noma eyenza impilo ibelula ukubhekana nayo, ngokwenyama noma ngokwengqondo, izokwamukeleka. Kepha amandla okubhekana nempilo ahlala encishiswa.
Umuntu odla izidakamizwa futhi ophethwe yizinhlungu nokuphelelwa yithemba uyaqhubeka nokusebenzisa izidakamizwa. Yize engafuni ukuba umlutha, akazizwa sengathi ikhona enye indlela yokuphuma.
Kodwa ke, ukuncika kwizidakamizwa kungakwazi ukungasingathwa ngokuphelele.
Lapho nje ezizwa enempilo futhi ekwazi ukubhekana nempilo ngaphandle kwezidakamizwa kunalokho akwenzayo kwizidakamizwa, umuntu akasazidingi.
Scientology iqukethe ubuchwepheshe obuqondile (ukusetshenziswa kolwazi kwi-purpose engokoqobo) eyenza umuntu ashiye izidakamizwa ngaphandle kobunzima futhi imkhulule emiphumeleni yazo emibi ngokomzimba nangokwengqondo.
Lobu buchwepheshe buthola futhi busebenzisana nesizathu sokuthi umuntu waqalelani izidakamizwa endaweni yokuqala, ngakho ke ngeke azizwele enesidingo sokuzisebenzisa.
Izidakamizwa zivimbela abantu ekufezeni ukuthuthuka ngokwengqondo nangokomoya, okuyinjongo yangempela ye-Scientology.